Caymiska iyo Dhigaalada COVID-19 | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Caymiska, Dhigaalada iyo Daaweynta Korona Fayraska (COVID-19)
Fahamka baaritaanka COVID-19 iyo caymiska daawaynta
Marka la joogo UnitedHealthcare, waxaan u joognaa inaan kaa caawino inaad fahamto waxa la caymiyo iyo sida loo helo daryeelka. Waxaan rabnaa inaan kaa caawino ka jawaabida su'aalaha aad qabto iyo inaan kugu xirno dhigaalada laga yaabo inay ku caawiyaan waqtigan.
Xusuusnow inaad booqato bixiyeyaasha ku jira shabakada oo had iyo jeer tus kaarka aqoonsiga xubinnimo ee UnitedHealthcare ee la xiriira baaritaanka, booqashooyinka ama daaweynta COVID-19. Sidoo kale, la socodsii bixiyaha daryeelkaaga aasaasiga ah (PCP) wixii natiijooyinka baarista COVID-19 ah ama daryeelka laga yaabo inaad hesho.
Dad badan ayaa bilaabaya qorshe caafimaad oo cusub sanadka cusub. Qorshahan, lacagaha go'an, lacagaha kugu soo aado ama lacagaha la jari karo ayaa laga yaabaa in dib ay u bilawdaan. Gal koontadaada onlaynka ah ee UnitedHealthcare ama dib uga eeg agabka qorshahaaga si aad u hesho faahfaahinta ku saabsan qorshahaaga macaashka ah.
Baaritaanada Guriga ee COVID-19 ee Laga Helo Farmashiga (OTC) ee Bilaashka ah
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkan booqo covidtests.gov.
Ogaanshaha fayraska/nuxurka iyo baaritaanka jeermis la deriska
UnitedHealthcare waxay si xoogan u taageeraan baahida loo qabo baaritaanka la isku halayn karo waxayna ku dhiirigeliyaan bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka inay isticmaalaan baaritaanada ay FDA oggolaadeen ee la isku halayn karo. Baarista fayraska/ogaanshaha nuxurka (diagnostic) ayaa go'aamiyaan inuu qofku imminka qabo COVID-19. Baaritaanka jeermis la deriska (serology) ayaa go'aamin kara inuu qofku u baylah noqday COVID-19, oo sida laga soo xigtay FDA, baaritaankan waa inaan loo isticmaalin in lagu ogaado caabuqa hadda jira.
Inta lagu gudajiro muddada xaaladda degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha, oo hadda la qorsheeyay inay dhammaato Luulyo 14,2022, waxaad heli doontaa $0 kharashka qeybsiga ah (lacagaha go'an, kugu soo aado ama laga jari karo) ee caafimaad ahaan ku habboon baaritaanka COVID-19 markuu amar ku bixiyo dhakhtar ama xirfadlaha daryeelka caafimaadka iyadoo laga leeyahay ujeeddooyinka ogaanshaha ama daaweynta cudurka. Baaritaanada waa in ay FDA oggolaadaan si loo caymiyo iyadoo aan kharash la wadaagin.
Caymiskan wuxuu khuseeyaa baaritaanada shabakada ku jira ama ka baxsan ee loogu talagalay qorshayaasha caafimaadka ee Medicare Advantage, Exchange, Individual iyo Qorshaha Loo-shaqeeyuhu kafaalo-qaado. Wixii shakhsiyaad ah oo ka diiwaangashan Qorshayaasha Bulshada ee UnitedHealthcare, kala duwanaanshaha gobolka iyo qawaaniinta ayaa laga yaabaa in la dabaqo inta lagu gudajiro waqtigan. Macaashyada sida kale dib ayaa loogu eegi doonaa si waafaqsan qorshaha caafimaadkaaga.
Haddii baaritaanka COVID-19 aad ugu baahan tahay shaqadaada, waxbarashadaada, caafimaadkaaga guud ama ujeedooyinka la socoshada (kormeerka) xaaladda, UnitedHealthcare ayaa caymin doonta baaritaanka markuu farayo sharciga lagu dabaqi karo. Macaashyada waxaa looga shaqayn doonaa si waafaqsan qorshaha macaashka caafimaadkaaga, oo qorshayaasha macaashka caafimaadka guud ahaan ma caymiyaan baarista laga leeyahay ujeeddooyinka la socoshada xaaladda ama caafimaadka dadweynaha. Waxaan sii wadnaa waxyaabaha sharciyeed ee soo kordha sharciyeed inta lagu gudajiro muddooyinka xaaladda degdega ah.
Baaritaanku waa muhiim si loo yareeyo faafitaanka COVID-19. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa adiga—xubnaheena—iyo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka inaad isticmaashaan Baaritaanada ay FDA oggolaadeen. Waxaa jira laba nooc oo baaritaanada COVID-19 ah:
Baaritaannada ogaanshaha cudurka ayaa go'aamiyaan inaad imminka qabto COVID-19.
Baaritaanada jeermis la deriska ayaa laga yaabaa inay go'aamiyaan inaad qaaday fayraska iyo in kale. Sida laga soo xigtay FDA, baaritaanada jeermis la deriska waa in =aan loo isticmaalin in lagu ogaado caabuqa imminka jira.
Waxaad heli doontaa $0 kharashka qeybsiga ah (lacagaha go'an, kugu soo aado ama laga jari karo) ee caafimaad ahaan ku habboon baaritaanka COVID-19 inta lagu gudajiro muddada xaaladda degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha, imminka madlan inay dhammaato Luulyo 14, 2022. Baarista caafimaad ahaan habboon waxaa amar ku bixiya dhakhtar ama xirfadlaha daryeelka caafimaadka iyadoo laga leeyahay ujeeddooyinka ogaanshaha ama daawaynta cudurka. Baaritaanada waa in ay FDA oggolaadaan si loo caymiyo iyadoo aan kharash la wadaagin. Caymiskan wuxuu khuseeyaa baaritaanada shabakada ku jira ama ka baxsan ee loogu talagalay qorshayaasha caafimaadka ee Medicare Advantage, Exchange, Individual iyo Qorshaha Loo-shaqeeyuhu kafaalo-qaado iyadoo loo marayo muddada xaaladda degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha. Wixii shakhsiyaad ah oo ka diiwaangashan Qorshayaasha Bulshada ee UnitedHealthcare, kala duwanaanshaha gobolka iyo qawaaniinta ayaa laga yaabaa in la dabaqo inta lagu gudajiro waqtigan.
Qorshayaasha macaashka ee UnitedHealthcare guud ahaan ma caymiyaan baaritaanka shaqada, waxbarashada, safarka, caafimaadka dadweynaha ama laga leeyahay ujeedooyinka la socoshada, hadduu sharcigu farayn mooyee. Macaashyada waxaa looga shaqayn doonaa si waafaqsan qorshaha macaashka caafimaadkaaga.
Haddii aad u maleyneyso inaad u baahan tahay baaritaanka COVID-19, la hadal bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga ama mid soo qaado.
Haddii aad la jirrato COVID-19, bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga ayaa laga yaabaa inuu kuu qoro daawooyin. Wixii daaweynta COVID-19 ah, kharash qeybsiga wuxuu ahaan doonaa mid waafaqsan qorshaha macaashka xubinta. Adiga ayaa mas'uul ka ah wax kasta oo lacagaha go'an, kugu soo aado, la jari karo ah ama kharashaadka ka baxsan shabakadda. Caymiskan wuxuu khuseeyaa qorshayaasha caafimaadka ee Medicare Advantage, Exchange, Individual iyo Qorshayaasha caafimaadka ee ee Loo-shaqeeyuhu Maalgeliyo.Xubnaha ka diiwaangashanUnitedHealthcare Community Plans, Qoddobada iyo qawaaniinta gobolka ayaa la dabaqi karaa inta lagu gudajiro waqtigan.
Haddii aad qabto su'aalo ama aad u baahan tahay macluumaad ku saabsan macaashkaaga
Wac lambarka ku yaala kaarkaaga aqoonsiga xubinnimo ama gal koontadaada caafimaadka.
Sida loo helo baaritaanka Korona Fayraska (COVID-19).
Haddii aad u malaynayso inaad u-baylah noqotay Korona Fayraska (COVID-19) ama aad qabto astaamo ay ka mid yihiin qandho, qufac ama neef-qabasho, wac bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga isla markiiba. Marar badan, waxaad la hadli kartaa bixiyaha adiga oo isticmaalaya FaceTime, Skype ama Zoom, taasoo la yiraahdo telehealth (booqasho fogaan-arag ah). Haddii bixiyaha daryeelka caafimaadkaagu uu oggolaado in lagu baaro, wuxuu isku dubaridi doonaa halka lagugu baari doono.
Baaritaanada guurguura iyo gaariyeed ayaa noqon karaan fursad. Isticmaal qalabkeena raadiyaha si aad u hesho xarun baaritaan.
Dawladda dhexe waxay bilawday mareeg qaran taasoo qoys kasta ka heli karo hal shixnad oo ka kooban afar baaritaanada guriga ee COVID-19 ee laga helo farmashiga (OTC) ee bilaashka ah oo si toos ah looga helo covidtests.gov. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkan booqo covidtests.gov.
Taageerada loogu talagalay xubnaheena ku jira halista uga sarreysa: Medicare Advantage iyo Medicaid
CDC waxay sheegtay in dadka waaweyn iyo dadka da'aad kasta ah ee qaba xaalado caafimaad oo halis ah ayaa laga yaabaa inay halis sarreysa ugu jiraan jirro daran oo ka dhalata Korona Fayraska (COVID-19). Tusaalooyinka xaaladaha caafimaad ee halista ah waxaa ka mid ah xaaladaha wadnaha iyo sambabada ee raaga, neefta, habdhiska difaaca jirka ee wiiqmay, sonkorowga, cudurka kelyaha ee raaga iyo beerka. Haddii aad uur leedahay, aad naafo tahay ama aad noqoto hoy-laawe, waxaad sidoo kale ku jiri kartaa halis sarreysa.
Haddii aad hoos timaado qaybta sare, bixiyahaagu waxaa laga yaabaa inuu kuu sheego inaad gudaha ku nagaato oo ka fogaato dadka kale (is-go'doomin). UnitedHealthcare waxay halkan u joogtaa inay ku caawiso waqtigaas iyo inay kaa caawiso dhimista u-baylah noqoshada suurtagalka ah ee fayraska. Waxaan kaa caawin karnaa sidii aad u heli lahayd daawooyin, sahay, cunto iyo daryeel. Waxaa sidoo kale ogaan kartaa wax ku saabsan barnaamijyada taageero.
Xubnaha, fadlan wac lambarka telefoonka ee ku yaala kaarka aqoonsiga xubinta. Markaad wacdo, u sheeg bixiyahaaga daryeelka caafimaadka inuu kuu qoray is-go'doomin.
Ogow taxaddarrada la sameeyo haddii aad xubin ka tahay Medicare Advantage ama aad halis ku jirto.
Dhigaalada Dheeraadka ah ee loogu talagalay Xubnaha
La hadal bixiye adiga oo jooga guriga adiga oo isticmaalaya telehealth (booqashada fogaan-aragga ah)
UnitedHealthcare waxay balaarisay helitaanka booqashada fogaan-aragga si aad ugu sugnaato raaxada gurigaaga oo aad u hesho daryeelka saxda ah. Telehealth (booqashooyinka fogaan-aragga) waxaa loo isticmaali karaa baahiyaha daryeelka caafimaadka ee Korona Fayraska (COVID-19) iyo kuwa aan ahayn Korona Fayraska (COVID-19).
Tani waxay noqon kartaa waqti walaac badan leh. Dhigaalada hoose waa bilaash waana la heli karaa 24/7.
La hadal kalkaaliso
Waxaad wici kartaa lambarka ku qoran kaarka aqoonsiga xubinta waxaadna la hadli karataa kalkaaliso haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo ogaanshaha khatartaada ama aad raadinayso talo caafimaad iyo taageero la xiriirta Korona Fayraska (COVID-19). Sidoo kale waad u wici kartaa kalkaalisada wax ku saabsan walaacyada guud ee daryeelka caafimaadka.
Dib u hel daawooyinka kaa dhammaaday
Geynta farmashiyaha ayaa la heli karaa iyadoo loo marayo Optum Home Delivery adiga oo saxiixaya koontadaada qorshaha caafimaadka. Si fudud u dooro Soo-dejinta Optum Home Delivery. Geynta farmashiyaha sidoo kale waxaa laga heli karaa farmashiyeyaasha tafaariiqda oo badan.
Waxaa laga yaabaa in aan u-baylah noqday Korona Fayraska (COVID-19). Maxaan sameeyaa?
Wac bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga isla markiiba haddii aad aaminsan tahay inaad u bayla noqotay Korona Fayraska (COVID-19) ama aad qabto astaamo ay ka mid yihiin qandho, qufac ama neef-qabasho.
Waxaad heli kartaa bixiyaha daryeelka caafimaadka ee ku jira shabakadda markaad iska diiwaangeliso koontadaada qorshaha caafimaadkaama adiga oo la hadlaya xuquuq u doode oo wacaya lambarka telefoonka ee ku yaala kaarka aqoonsiga xubinta ee UnitedHealthcare.
Maxaa kale ay tahay inaan ka ogaado Ivermectin iyo COVID-19?
Sida laga soo xigtay CDC, habka ugu waxtarka badan ee looga hortagi karo cudurka halista ah ee COVID-19 waa in la is tallaalo. Daawooyinka kale ee loo oggolaaday daawaynta COVID-19 waa daawooyinka jeermis la deriska asaliga ah. La hadal dhakhtarkaaga si aad wax badan u ogaato.
Waa maxay caymiskayga loogu talagalay baaritaanada COVID-19 ee aan farmashiyaha laga samayn karin?
Xubnaha UnitedHealthcare Community Plan, caymiska baaritaanka COVID-19 waxaa go'aamiya barnaamijka Medicaid ee ka jira Gobol kasta, oo waxyaabaha gaarka ah ee khuseeya caymiska way kala duwan yihiin gobol ka gobol.
Dadka u-qalma Medicaid iyo Medicare labaduba, maamulaha macaashka Medicaid waa inuu bixiyaa hagis ku saabsan caymiskooda. Xubnuhu waa inay wacaan lambarka ku yaala dhabarka dambe kaarkooda haddii ay su'aalo qabaan.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 05.17.2022 waqtiga 12:51 GALABNIMO CDT